Fanafihana teny Amboanjobe : Jiolahy roa maty voatifitra, zandary roa naratra -
AccueilRaharaham-pirenenaFanafihana teny Amboanjobe : Jiolahy roa maty voatifitra, zandary roa naratra
Jiolahy roalahy no namoy ny ainy, zandary roa sy sivily iray hafa kosa no naratra vokatry ny fifampitifirana sy ny savorovoro niseho teny amin’ny fokontany Amboanjobe, kaominina Bongatsara, Distrikan’Antananarivo atsimondrano, omaly hariva, tokony tamin’ny 04 ora latsaka fahefany. Araka ny fanomezam-baovao, dia tonga nanafika mpambongady zava-pisotro iray teny an-toerana ny jiolahy efa-dahy nirongo basy poleta sy zava-maranitra. Rehefa tafiditra tao amin’io toeram-pivarotana io izy ireo, dia nanambana no sady nadrahona ireo mpivarotra, hamoaka ny vola maty rehetra. Tsy nanaiky lembenana izay nolazain’ireo olon-dratsy anefa ireo voatafika, fa niantso vonjy tamin’ireo manodidina. “Nisy tafavoaka tany ivelany ireo olona sasany voatafika ireo, ka nampandre ny zandary. Teo no nitifitra ireo jiolahy izay nahavoa ilay rangahy tompon-tsena teo amin’ny kibony”, hoy ny vaovao voaray, avy amin’ny zandarimariam-pirenena. Vetivety dia vory ny olona, izay nihodidina teo amin’ilay tranombarotra voatafika.
Nikoropaka ireo jiolahy, ka nitady hevitra handosirana .Nilatsaka tampoka ilay vy mihorona ny hidin-trano, ka tavela tao anatin’io tsena io ny iray izay nitam-basy. Niezaka nivoaka teo amin’ny varavaran-kely ity farany, saingy noho ny fisian’ny hantsana be tao ambadik’ilay trano, dia tavela tao ity jiolahy ity. Nifanenjehan’ny fokonolona ireo telolahy, ka ny iray no voasambotr’izy ireo, raha toa ka tafaporitsaka ny roa. Mbola nanohitra ireo olona ihany ity jiolahy azo sambo-belona ity, ka nanaparan’ny olona ny hatezerany ary maty tsy tra-drano. Vao nahita ny fiavian’ireo zandary ilay iray tavela tao an-trano, dia nitifitra avy hatrany, ka raikitra ny fifandonana izay naharitra 05 minitra teo, ka tamin’izany no nahalavo ity olon-dratsy ity. Voa nandritran’io fifampitifirana io teo amin’ny ankihibeny ny ranjony kosa ireo zandary roalahy. Azo tany amin’io jiolahylavo io ny basy poleta vita artizanaly niaraka tamin’ny bala maromaro. Nentina namonjy hopitaly avy hatrany moa ireo naratra, izay efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy tsirairay avy amin’izao fotoana izao. Mbola nitohy hatramin’ny omaly alinakosa ny fisavàna ny tanàna manodidina rehetra ho fikarohana ireo jiolahy tafaporitsara ireo.
Tonga nanome voninahitra sy nitarika ny lanonana “Fandresena 2018”, ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, ny sabotsy 28 jolay lasa teo. Lanonana izay famoahana mpianatra miaramila manamboninahitra eo anivon’ny Akademia miaramila, ao Antsirabe. Ho an’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina ...Tohiny